Weligama (Sri Lanka) - indawo, idolobha elincane obujwayelekile eningizimu yalesi siqhingi, esemgwaqweni ogwini sandy we-Indian Ocean. Uyithola kanjani kuye nalokho ezikhangayo kufanele sinake? Funda mayelana kuwo.
Kulesi emzaneni abendawo baziphilisa engenayo esuka ezokuvakasha nokudoba. Iminyaka eyishumi nambili edlule Weligama kwaba-tsunami enamandla kakhulu ayehlanganisa yonke indawo yayo futhi wabhubhisa inqwaba izindlu. Kodwa namuhla, ngenhlanhla, nokuncane nenhlekelele kwesokunxele.
Ngo Weligama iholide like kuqala kulabo abamthanda ezingosini ze. Ensimini ka ogwini uzothola Sands segolide, neze amatshe acijile amatshe. Nokho, akukho ukugeleza enkulu izivakashi abafuna iholidi beach. Lokhu kungenxa aphikelele amagagasi, yingakho kukhona like Surfers. izivakashi eziningi uncamela Skate for fun ngaphandle ezemidlalo. Lapha ungafunda hlola, futhi ngokuvamile Weligama - lena indawo okungcono kakhulu Surfers engxenyeni eseningizimu of Sri Lanka. Lapha uzothola kokubili esikoleni Wabasaqalayo futhi ushintsho, futhi endaweni lapho ongoti.
Lolu phawu komuzi - kuba kubadobi ababeziphilisa sithiye nesigxobo ezenziwe ngokhuni. engqongqoza wakhe bangena olwandle a amamitha ambalwa kusuka ogwini. Nge abadobi ngokuvamile izithombe izivakashi, futhi bayakujabulela abe yisisulu izithombe kwezobuciko noma nje isithombe ikhumbule emangalisayo Sri Lanka. Kulokhu, eqinisweni, kungukuthi wahlanganyela ukudoba! Lesi sici ihlose ukuheha izivakashi, abangakwazi ucele isithombe imali.
Ngo Weligama kungekho evuthiwe ingqalasizinda noma izihambi, bese ungayeka ehhotela noma yezivakashi, okunikeza okungenani kancane ukhululekile. Akufani ofuna ukukwenza ukuyothenga ukudla noma yasendlini izinto kuphela. Abadobi ukudayisa izinhlanzi kanye kwasolwandle amakhono ogwini. Kunezindlela ezimbalwa iIgama izikhungo, futhi namanje ngezinye izikhathi kungatholakala umbukiso elihambisana nokusina. Ngo Weligama, amahhotela zendawo, kutilolonga Ayurveda. Izivakashi azibonayo izinqubo ezifana exotic yangempela, iqinisekisa udumo lwawo.
Beaches e Weligama
Uma ufuna ukuza ebhishi, Weligama (Sri Lanka) ngo-jikelele uzongithanda. Kunezindlela eziningi isihlabathi ahlanzekile olwandle, futhi ikwazi ukungena olwandle musa ukumosha izindlu nezitolo. Singasho ukuthi izingxenye ezithile lolwandle ngempela ongaqhathaniswa ipharadesi izithombe esibonisa amaholide zezandla. Kodwa ngesikhathi esifanayo abantu abambalwa lapha, futhi azikho izinto ezivamile zasolwandle izivakashi, ngaphandle surfing. Nokho, uma ku kobhukuda eside, le ndawo akunakwenzeka ukuba ezikufanelayo, ngoba ebhishi lapha lincane, isihlabathi elikhona siyibumba, ebusweni liwukuthi ngempela oshelelayo. Ngasempumalanga Weligama, e Mirissa, ungathola indlela uphumule ngaphandle serfernoy ebhodini.
Kule ngxenye lesi siqhingi sinamabandla amahhotela ezinhle. Weligama, Sri Lanka, inikeza ikhono thola izindawo isabelomali, maphakathi no-emakethe, kanye okunethezeka. Ungakwazi phumula, ujabulele ukunambitheka zendawo emkhathini we eCeylon, noma uhlale induduzo villa ocebile. Nokho, ezishibhile ngempela ukuthola lapha ngisho simple, ngoba izindleko ikamelo ejwayelekile ehhotela lolwandle iqala ngo zamadola amane. Uma ufuna ibhajethi inketho ngempela, iya ekujuleni emzaneni. Ngo inqwaba amahhotela ungathola indawo ngamakhasimende ngu Surfers. Ngaphandle Ezezindlu lapha, izivakashi ukuthatha ibhodi aqashiwe noma axoxisane neHhovisi abaqeqeshi wendawo.
Eduze ugu olusentshonalanga ye-Sri Lanka iyisiqhingi esincane, okuthiwa Taprobane. Lapha, engxenyeni yokuqala yekhulu leminyaka elidlule le Earl Lokudabuka French Yakhiwa villa ajabulisayo ezimhlophe enophahla tile abomvu. Okwamanje, le ndawo ehhotela okunethezeka nge izinkanyezi ezinhlanu, okuyinto bacwiliswa oluhlaza izitshalo ezingavamile.
Izimo zezulu futhi samaholidi
Ngo Weligama, ungakhululeka ngasiphi isikhathi sonyaka. Isimo sezulu eSri Lanka ngo-January, isibonelo, ikuvumela ukuba ujabulele ocean efudumele futhi ukuhlangabezana uNcibijane ngaphansi kwesimo angavamile. Kodwa khumbula ukuthi ukuze uphumule endaweni ukhululekile, ngaphandle kokwesaba amakhaza nemvula, kungcono ukuba beze Weligama ngenkathi okusezingeni eliphezulu.
Uma sikhuluma ongaphakeme, le nkathi kusukela Julayi nesiphetho Okthoba. Ngalesi sikhathi, kungase kube esiguqubele futhi kuqhathaniswa nemvula. Yiqiniso, ngisho isizini ongaphakeme eSri Lanka, ungathola ithuba ukuhlala ukhululekile, kodwa lokho uma kukhona ingozi sezulu nababi konakalisa isimo semizwa yakho.
Kodwa lapho okufanayo abuya Weligama? Khetha isizini okusezingeni eliphezulu - kusukela ngoNovemba uJuni. Isimo sezulu eSri Lanka ngo-January, February, March no-April isiqinisekiso iholide ngaphandle imvula esibhakabhakeni liguqubele.
Indlela ukuya edolobheni
Weligama indawo ikuvumela ukufinyelela emzini Colombo Airport, futhi kusukela Colombo futhi Galle. Kulokhu, zonke izimali eziyingxenye zokugcina isetshenziselwa ukufakelwa ukuthatha Ibhasi resort. Lolu hlobo ezokuthutha ikuvumela ukuba uthole lapho Weligama, Sri Lanka. Izibuyekezo zezivakashi basikisela ukuthi kungcono nje ufika resort ngeteksi kusukela Colombo sezindiza.
Ukuze ukulondoloza okuhle, ungaya lapha ngebhasi noma ngesitimela. Wena ojikelezayo kusuka esikhumulweni sezindiza esitobhini, bese ngokudlulisela kuya ukubalekela imizi Galle futhi Matara, Weligama futhi phuma esiteshini endleleni.
Sri Lanka, Weligama: izikhangibavakashi
Kule ndawo, akukho inani elikhulu kakhulu izivakashi. Ngo nje amakhilomitha ambalwa ukusuka Weligama, ungaya epulazini inyoka. Futhi eduze amatheku izivakashi wendawo eqoshiwe kwi uhambo kuya blue whale. Ngaphezu kwalokho, Habaraduva emzaneni bangase sijabulise nawe emangalisayo umnenke ipulazi.
Ngokuqondene namatshe ezikhumbuzo, lapho babe ukunambitheka zazo ezihlukile: isiPutukezi wamakoloni izakhiwo umhlobiso ezibaziweyo, stupas Buddhist futhi amasonto obuKatolika. Ikakhulukazi izivakashi like kwesithombe amamitha amathathu ubude, elalinikezelwe kunkulunkulu sokufa, okuyinto ezibaziweyo edwaleni. Vala ebaziwe kungabonwa emhumeni ngokuthi Kustoradzha, okuyinto ngokusho legend wendawo wahlala Sri umbusi Lankan ngochoko, owanqoba yokugula kwakhe. Yena ngiziphatha atehlukanisa wadla lukakhukhunathi kuphela, ngaleyo ndlela, elashwe nokwelashwa.